IPodcast 9x03: IOS 11 ilapha | Ndisuka mac
Kwakhona abafana be-Actualidad iPhone kunye noSoy de Mac badibene ukuze baxoxe ngeendaba zamva nje ezinxulumene neApple. Kule podcast yokugqibela sithethe ngayo lukukhutshwa kweenguqulelo zokugqibela ze-iOS 11, iwotsOS 4 kunye ne-tvOS 11, ngoku efumanekayo ukuze ikhutshelwe nawuphina umsebenzisi onesixhobo esihambelanayo.
Njengesiqhelo, uninzi lwenu ibingabafundi abavakalise ukungonwabi kwakho nje ukuba uhlaziyo lwenziwe, ukuba ukusetyenziswa kwebhetri kuphezulu, ukuba ngaba kushiyekile, ukuba oku akusebenzi ... Okona kulungileyo singenza njalo thintela ezi ntlobo zeengxaki, kwaye ukuba awukayihlaziyi isixhobo sakho okwangoku, ukufakela okucocekileyo.
Kwipodcast sikhe sathetha ngeendaba eziphambili ezingakhange zize nohlobo lweshumi elinanye lwe-iOS, i-tvOS 11 kunye ne-watchOS 4. Siphinde sagqabaza ngeendlela ezahlukeneyo zobungakanani kunye nobukhulu esinokuzifumana kwiimodeli ezintsha ze-iPhone, iimodeli Banokubhukishwa ukususela ngoLwesihlanu odlulileyo kwaye ngalo mzuzu kubonakala ngathi khange ibekho ngokutsala okufanayo nakweminye iminyaka, ukusukela oko kutsala kuya kuthatha i-iPhone X esitratweni ngaphandle kwexabiso eliphezulu.
Ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwi-podcast yethu bukhoma, ungayenza itshaneli yethu yeYouTube apho rhoqo ngoLwesibini ezinzulwini zobusuku, saqala usasazo ngqo. Ngexesha losasazo, bonke abo bafuna ukuthatha inxaxheba banokwenza njalo ngengxoxo ekhoyo. Kodwa ukuba ukhetha indawo yaseTunes, kufuneka uye kuyo itshaneli yethu kwi-iTunes kwaye ubhalise ukuze kwiiyure nje zokurekhoda ipodcast ifumaneke ngokuthe ngqo kwifowuni yakho okanye ngeTunes yeMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodcast 9 × 03: I-iOS 11 ilapha
IDolby Surround Atmos iza kwiApple TV 4k kuhlaziyo lwamva
Isicelo seNcwadana yokubhala sihlaziywa kuhlobo lwe-3.0 ngophuculo oluninzi